Nezvedu - LGLPAK LTD.
LGLPAK ™ - Nyanzvi dzeKupakata
LGLPAK™ inogadzira, inopinza, uye inopa mhando dzese dzekudzivirira, dzinochinjika kurongedza. We dzidzira mu Polyethylene Bags, Tubing, uye Film. Isu tinokwanisa kutsika dhizaini uye kugadzira mapurasitiki muhombodo dzakawanda, mavara uye anodhinda kuti usangane ako akasiyana ekupakata zvinodiwa. Isu tinopawo hombe kuverenga yeakajairika poly bhegi saizi uye masitayera. Isu tiri yako imwe-yekumira sosi yekushanduka kurongedza.
Tsika Kavha Mhinduro
Kuburikidza nenyika-ye-iyo-hunyanzvi tekinoroji mukuwedzera, kudhinda, uye kushandura tinogadzira yakasarudzika kurongedza mhinduro kune maindasitiri emarudzi ese. Vimba nechikwata chedu chevanopakata nyanzvi kuti vakubatsire iwe kusarudza sarudzo chaidzo pane yako chaiyo kunyorera. Kana iwe uchida tsika kudhinda nemifananidzo, yedu iri-mumba yekugadzira dhipatimendi inomira yakagadzirira kukubatsira iwe kushandura mazano ako kuita zvigadzirwa zvekupakisha.
Semutungamiri wepurasitiki wepurasitiki, LGLPAK™ akawana zita rekuti “iyo Kavha Nyanzvi". Nemaitiro edu epamba uye epasi rese ekugadzira, tinogona kusangana nechero chero stock kana tsika yekupakata zvaunoda. Kunyangwe odha yako iri hombe kana diki, yakapusa kana yakaoma, tora pane hunyanzvi hwedu kuti ikubatsire kusangana zvese zvako zvekutakura zvaunoda.
Vatengi vedu vanogara vachitirumbidza pamusoro pechengetedzo yakasarudzika yavanowana musangano redu rese. Isu tinoedza kuvandudza kwenguva refu-vatengi hukama hwakavakirwa pakuvimbana nekuremekedzana. Hazvina mhosva kuti chii chiri kudiwa, iwe unogona kutarisira kune yedu inopa mubayiro-inokunda vatengi timu yekubata yako chikumbiro iwe pachako uye nehunyanzvi.
Paunosarudza LGLPAK™, iwe unowana shamwari ine ruzivo yakazvipira kupa yakanakisa kurongedza mhinduro kune rako bhizinesi. Chivimbiso chedu chakareruka: Tinokuunzira mhinduro dzakanakisa pamutengo wakaderera! Yakavimbiswa!
Sangano redu rese rinotungamirwa nekuzvipira kune kugona uye chishuwo chekudarika zvaunotarisira. Isu tinoenda kune ese kureba kuti tive nechokwadi chedu maitiro, masevhisi, uye zvigadzirwa zvinopfuura zveindasitiri zviyero. Yedu ISO chitupa inovimbisa iwe yemhando inoenderana mune zvigadzirwa nemasevhisi, kukurumidza kugadzirisa kumatambudziko uye kuzvipira kwedu mukuenderera mberi nekuvandudza. Isu tine chivimbo chakakura muzvigadzirwa zvedu nemasevhisi zvekuti tinovimbisa kuti iwe uchave nekugutsikana ne100%, kana isu tigoita izvo zvinotora kuti zvive zvakanaka.
1.Anopfuura makore gumi ane ruzivo rwekugadzira uye kutumira kunze kwenyika.
2.Basa rakakwana. Isu tinogara takazvipira kutsvagisa nekusimudzira.
3.Simbisai zvigadzirwa zvinosangana nemhando yepamusoro.
4.Iva nechokwadi chekuti zvinhu zvichaendeswa nenguva.
5.Unyanzvi uye hushamwari sevhisi & mushure mekutengesa sevhisi.
6.Yakavimbiswa mhando yakanaka uye sevhisi yepamusoro.
7.Assort dhizaini, mavara, masitaera, mapatani uye saizi zviripo.
8.Yakagadziriswa magadzirirwo anogamuchirwa.